Manao tatitra momba ny toetry ny nosy izao ilay mpandraharaha sinoa any Tonga
“Ny zavatra hitako hatreto dia samy mandray anjara amin'ny famonjena vonjy maika sy ny asa vonjy maika ny rehetra,” hoy i Yu. “Saika manao saron-tava avokoa ny rehetra. Eny an-dalambe ny lavenona volkano satria naharitra ora maromaro ny lavenona. Feno lavenona ny tany, anisan’izany ny zava-maniry sy ny tranon’olona”.
“Misy ireo mpiasa an-tsitrapo efa nanadio ny lalana, saingy tsy mbola any anaty ala. Vao avy nanadio lalana ny olona”, hoy izy.
Mikasika ny toe-piainana, anisan'izany ny rano, ny jiro ary ny sakafo any Tonga, dia mbola tsy niverina tamin'ny laoniny ny raharaha Yu, saingy nisy fanatsarana ny faritra sasany.
Nambarany fa niverina tamin’ny faritra maro ny jiro tao anatin’ny iray andro taorian’ny fipoahan’ny herinaratra. Ankoatra izany, taorian’ny mangiran-dratsy, tamin’ny andro nisian’ny fipoahana, dia namerina entana ny rehetra.
"Izaho manokana dia nitahiry rano ary avy eo sakafo ary rano bebe kokoa," hoy izy.
“Ampy ny entanay eto. Tsy misy rano amin’ny tavoahangy eny amin’ny toeram-pivarotana amin’izao fotoana izao, fa mbola misy entana hafa.”
Tsy misy legioma amin'izao fotoana izao. Nilaza i Yu fa nilaza taminy ny namany miasa amin'ny fambolena fa tsy hanana legioma vaovao mandritra ny iray volana mahery ny olona ao amin'ilay nosy. Ny amin’ny voankazo kosa dia hoy izy: “Tsy dia misy loatra ny eto amin’ny Nosy, raha ny voalohany, fa ny pastèque ihany. Saingy na izany aza dia nanjary zara raha izao. ”
“Tsy heveriko fa niverina tamin'ny laoniny ny fiainana,” hoy i Yu tamin'ny CGTN.
Nambarany fa nanambara ny fanjakana lefitra ny praiminisitra lefitra, ary miara-miasa amin’ny fanampiana ny tra-boina sy ny fanadiovana ny lavenon’ny volkano eny an-dalana ny Tonga.
"Raha tsy voadio izy ireo dia hiverina eny amin'ny rivotra izy ireo rehefa mandalo ny fiara, ary hipetraka eny an-tampon-trano," hoy izy.
“Mivantana avy amin’ny orana ny rano fisotro any Tonga. Ny tokantrano tsirairay dia manana mpijinja ranon’orana apetraka eo amin’ny tafon-tranony, ka tsy maintsy ataontsika tsara ny fanadiovana ny lavenona rehetra”.
Previous Armani beauty dia manambara ny endrika hatsaran-tarehy vaovao
Manaraka Sakafo hazan-dranomasina lehibe indrindra: Trondro manidina sy Cou Cou avy any Barbados